कोरोनाबाट बच्न नौ वर्षीय बालकले आविष्कार गरे हात धुने साधन – Koshidaily
मुख्य पृष्ठसमाजकोरोनाबाट बच्न नौ वर्षीय बालकले आविष्कार गरे हात धुने साधन
कोरोनाबाट बच्न नौ वर्षीय बालकले आविष्कार गरे हात धुने साधन
२८ बैशाख २०७७, आईतवार ०९:४० प्रकाशित
एजेन्सी, २८ वैशाख । केन्यामा नौ वर्षीय बालकले हात धुने साधन बनाएका छन् । उनको नाम स्टीभन रहेको छ ।स्टीभनले आविष्कार गरेको साधनबाट कोरोना भाइरस सर्ने सम्भावना कम रहेको जनाइएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस फैलिएको घोषणा गरपछि आफूले हात धुने साधनको विकास बनाउने निर्णय गरेको बालकले बताएका छन् ।
बालकले टिभीमा मानिसहरुले गाडी बनाएको देखेपछि र विद्यालयको क्षमतामा आधारित पाठ्यक्रमका आधारमा आफूलाई हात धुने साधन बनाउन मन लागेको उनले जनाएका छन् ।
हात धुने साधनका कारण फोहोर सतह छोएको हुनसक्ने हातबाट संक्रमण सर्ने सम्भावना कम हुने बीबीसीमा उल्लेख छ । पानी तान्ने उत्तोलकमा टेक्दा अर्को उत्तोलक माथि सर्छ अनि ट्यांकीलाई धकेल्छ त्यसपछि पानी बाहिर आउँछ । ह्यान्ड स्यानिटाईजरमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ ।
बालक स्टीभनका आमा बुबााका ६ जना सन्तान छन् । उनीहरु पश्चिमी केन्यामा बस्छन् । उनी त्यस्तै धेरै हात धुने साधनहरु ब्नाउन चाहान्छन् । तर उनीसंग पैसा छैन । उनले आफ्नो बाबुलाई पैसा जुटाइ दिनु अझै धेरै हात धुने साधन बनाउँछु भनेका छन् ।
बालिकालाई बलात्कार गर्दागर्दै पत्‍नीले बाहिरबाट चुक्कुल लगाइदिएपछि…
राहत लिएर जाँदा उल्टै राहत दिने घोषणा
अचानकको बाढीले बालक र जलाउँदै गरेको शव बगायो
पार्किङ गरेको बसभित्र मध्यरातमा युवायुवती भेटिएपछि…
के आफु मर्ने कुरा इरफान खानलाई पहिल्लै थाहाँ थियो ? नत्र किन यस्तो भयो !
नेपालमा बनेको भेन्टिलेटरको ‘सफल परीक्षण’
सिस्नु र अल्लोको कपडाबाट मनग्गे आम्दानी
माेरङमा ११ वर्षीय बालिकामाथि पटकपटक बलात्कार प्रयास,घटनामा संलग्न फरार